परमेश्वरको वचनअनुसारै व्यवस्थित | अध्ययन
“बुद्धिले नै परमप्रभुले पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो, र समझ-शक्तिले उहाँले आकाशलाई त्यसको ठाउँमा राख्नुभयो।”—हितो. ३:१९.
गीत: १०५, १०७
यहोवाजस्तो व्यवस्थित परमेश्वर अरू कोही हुनुहुन्न भनेर तपाईं किन विश्वस्त हुनुहुन्छ?
यहोवाले आफ्ना उपासकहरू सुव्यवस्थित भएको आशा गर्नु किन जायज हो?
परमेश्वरको वचनमा पाइने सल्लाहले मण्डलीको स्वच्छता, शान्ति र एकता कायम गर्न कसरी मदत गर्छ?
१, २. (क) परमेश्वरको सङ्‌गठन छ भन्ने कुरा सुन्दा कसै-कसैले कस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छन्‌? (ख) यस लेखमा हामी के छलफल गर्नेछौं?
के परमेश्वरको सङ्‌गठन छ? कसै-कसैले भन्लान्‌, “हामीलाई डोऱ्याउन कुनै सङ्‌गठन चाहिंदैन। परमेश्वरसित व्यक्तिगत सम्बन्ध गाँसे पुगिहाल्छ।” के त्यस्तो दृष्टिकोण सही हो? वास्तवमा सत्य कुरा के हो?
२ यहोवा व्यवस्थित परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँजस्तो व्यवस्थित अरू कोही पनि छैन भन्ने प्रमाण हामी यस लेखमा छलफल गर्नेछौं। साथै, यहोवाको सङ्‌गठनबाट निर्देशन आउँदा हामीले के गर्नुपर्छ भनेर पनि छलफल गर्नेछौं। (१ कोरि. १४:३३, ४०) प्रथम शताब्दीमा र अहिले हाम्रो समयमा पृथ्वीको कुना-कुनासम्म सुसमाचार प्रचार गर्न यहोवाको सङ्‌गठनको पृथ्वीमा भएको भागलाई परमेश्वरको वचनले डोऱ्याइरहेको छ। हामी परमेश्वरको वचन, बाइबलअनुसार चल्छौं अनि परमेश्वरको सङ्‌गठनले दिने निर्देशन पालन गर्छौं। त्यसैले विश्वभरिका हाम्रा मण्डलीहरूमा स्वच्छता, शान्ति र एकता छाएको छ।
यहोवाजस्तो व्यवस्थित परमेश्वर अरू कोही हुनुहुन्न
३. यहोवाजस्तो व्यवस्थित परमेश्वर अरू कोही हुनुहुन्न भनेर तपाईं किन विश्वस्त हुनुहुन्छ?
३ यहोवाजस्तो व्यवस्थित परमेश्वर अरू कोही हुनुहुन्न भनी सृष्टिले प्रमाणित गर्छ। बाइबल यसो भन्छ: “बुद्धिले नै परमप्रभुले पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो, र समझ-शक्तिले उहाँले आकाशलाई त्यसको ठाउँमा राख्नुभयो।” (हितो. ३:१९) हामीलाई “[परमेश्वरको] शक्तिको एक छेउ मात्र” थाह छ अनि हामीले “उहाँको मधुर-सोर” मात्र सुनेका छौं। (अय्यू. २६:१४) हामीलाई विभिन्न ग्रह, तारा र तारापुञ्जहरूबारे थोरै मात्र थाह छ। तैपनि यी आकाशीय पिण्डहरू अत्यन्तै व्यवस्थित छन्‌ भनेर मानिलिन बाध्य छौं। (भज. ८:३, ४) तारापुञ्जहरूमा लाखौं-लाख ताराहरू हुन्छन्‌। ती सबै एकदमै व्यवस्थित ढङ्‌गमा अन्तरिक्षमा घुम्छन्‌। सौर्यमण्डलमा भएका ग्रहहरूले मानौं, ज्ञानी भएर ट्राफिक नियम पालन गरिरहेझैं सूर्यको वरिपरि घुम्छन्‌! ब्रह्माण्डमा भएका सबै ग्रहहरू कत्तिको सुव्यवस्थित छन्‌ भनेर हामी कल्पनासमेत गर्न सक्दैनौं! यी सबै देख्दा ‘आफ्नै बुद्धिले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि’ गर्नुहुने यहोवा हाम्रो प्रशंसा, भक्ति र उपासनाको योग्य हुनुहुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौं।—भज. १३६:१, ५-९.
४. विज्ञानले किन मानिसहरूका थुप्रै प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन?
४ विज्ञानले ब्रह्माण्ड र पृथ्वीबारे धेरै कुरा पत्ता लगाएको छ। यसले गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो जीवन सजिलो भएको छ। तर विज्ञानले धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिन सकेको छैन। जस्तै: खगोलविद्‌हरूले ब्रह्माण्डको सुरुवात वास्तवमा कसरी भयो वा पृथ्वीमा मानिस, जीवजीवात्‌ तथा वनस्पतिहरू बाँच्न कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिन सकेका छैनन्‌। साथै, मानिसहरू जसरी भए पनि सधैंभरि बाँच्न चाहनुको कारण के हो भनेर पनि धेरैजसो मानिसले बताउन सक्दैनन्‌। (उप. ३:११, NRV) यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन्‌ तर किन मानिसहरूले यसको जवाफ दिन सकेका छैनन्‌? एउटा कारण हो, धेरैजसो वैज्ञानिक तथा मानिसहरूले परमेश्वर छैन भन्ने सोचाइलाई अघि सार्छन्‌ अनि क्रम-विकासको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्छन्‌। तर जुनसुकै ठाउँका मानिसहरूको मनमा खेलिरहेका यी गहन प्रश्नहरूको जवाफ यहोवाले आफ्नो वचनमा दिनुभएको छ।
५. हामी कुन-कुन तरिकामा प्रकृतिका नियमहरूमा निर्भर छौं?
५ यहोवाले प्रकृतिमा तोक्नुभएका नियमहरू भरपर्दा छन्‌। ती कहिल्यै अदलबदल हुँदैनन्‌। हाम्रो जीवन ती नियमहरूमा निर्भर छन्‌। इन्जिनियर, पाइलट, शल्यचिकित्सक, बिजुलीको वा पाइपको काम गर्ने मानिसहरू सबै आफ्नो काम गर्न परमेश्वरले तोक्नुभएका नियमहरूमा निर्भर छन्‌। जस्तै: सबै मानिसको शरीरको बनोट एकै प्रकारको छ भन्ने कुरामा शल्यचिकित्सकहरू ढुक्क छन्‌। त्यसैले त मुटुको शल्यक्रिया गर्नुपर्दा मुटु कहाँनेर छ भनेर चिकित्सकले खोजिरहनु पर्दैन। साथै, हामी प्रकृतिका नियमहरू पालन गर्छौं। जस्तै: गुरुत्वाकर्षणको नियमविपरीत गयौं भने हाम्रो ज्यानसमेत जान सक्छ!
परमेश्वरले नै व्यवस्थित गर्नुभएको हो
६. हामी किन यहोवाका उपासकहरू व्यवस्थित भएको आशा गर्छौं?
६ एकदमै व्यवस्थित सङ्‌गठन कस्तो हुन्छ भन्ने उत्कृष्ट उदाहरण हाम्रो ब्रह्माण्ड हो। त्यसैले यहोवाले आफ्ना उपासकहरू पनि सुव्यवस्थित भएको आशा गर्नु जायज छ। भनौं भने, हामीलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि उहाँले बाइबलमार्फत निर्देशनहरू दिनुभएको छ। परमेश्वरको सङ्‌गठनले दिने निर्देशन र उहाँले तोक्नुभएको स्तरअनुसार जीवन बिताएनौं भने हाम्रो जीवन दुःखै दुःखले भरिएको र समस्याग्रस्त हुन्छ।
७. बाइबलमा कुनै बेमेल छैन भनेर केले देखाउँछ?
७ बाइबल भनेको हामीसित कुनै सरोकार नभएको यहूदी तथा ख्रीष्टियन साहित्यको सङ्‌गालो मात्र होइन। यो परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको उत्कृष्ट कृति हो, यसमा कुनै बेमेल पाइँदैन। बाइबलमा धेरै वटा स-साना किताब छन्‌, तर ती सबै एकअर्कासित सम्बन्धित छन्‌। उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म बाइबलको मूल विषय एउटै छ। त्यो हो, प्रतिज्ञा गरिएको “सन्तान” अर्थात्‌ ख्रीष्टले शासन गर्नुहुने राज्यद्वारा यहोवाको सार्वभौमिकता उच्च पार्ने र पृथ्वीको लागि उहाँको उद्देश्य पूरा गर्ने।—उत्पत्ति ३:१५; मत्ती ६:१०; प्रकाश ११:१५ पढ्‌नुहोस्।
८. इस्राएलीहरू सुव्यवस्थित थिए भनेर हामी किन भन्न सक्छौं?
८ सुव्यवस्थित सङ्‌गठनको एउटा राम्रो उदाहरण पुरातन समयको इस्राएल राष्ट्र थियो। इस्राएल राष्ट्रले मोशाको व्यवस्था पालन गर्थ्यो। जस्तै: त्यस व्यवस्थाअनुसार “भेट हुने पालको ढोकामा सेवा गर्ने स्त्रीहरू” व्यवस्थित थिए। (प्रस्थ. ३८:८) इस्राएलीहरूको छाउनी र बासस्थान व्यवस्थित ढङ्‌गमा यताउता सार्ने गरिन्थ्यो। पछि राजा दाऊदले लेवीहरू र पुजारीहरूको दल-दल बनाएर व्यवस्थित पारेका थिए। (१ इति. २३:१-६; २४:१-३) इस्राएलीहरूले यहोवाको आज्ञा पालन गर्दा तिनीहरू सुव्यवस्थित हुन्थे अनि तिनीहरूमाझ शान्ति र एकता छाउँथ्यो।—व्यव. ११:२६, २७; २८:१-१४.
९. प्रथम शताब्दीको ख्रीष्टियन मण्डली व्यवस्थित थियो भनेर केले देखाउँछ?
९ प्रथम शताब्दीको ख्रीष्टियन मण्डली व्यवस्थित थियो। त्यतिबेला प्रेषितहरूको समूह मिलेर बनेको परिचालक निकायले मण्डलीलाई निर्देशनहरू दिन्थ्यो र ती पालन गर्दा मण्डलीको हित हुन्थ्यो। (प्रेषि. ६:१-६) पछि त्यस परिचालक निकायमा अरू एल्डरहरू थपिए। (प्रेषि. १५:६) प्रथम शताब्दीको परिचालक निकायका सदस्यहरू वा त्यस निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम गरिरहेका अरू व्यक्तिहरूले लेखेका पत्रहरूद्वारा पनि मण्डलीहरूलाई सल्लाह र निर्देशनहरू दिइन्थ्यो। (१ तिमो. ३:१-१३; ती. १:५-९) परिचालक निकायको निर्देशन पालन गर्दा मण्डलीहरूले कस्तो लाभ उठाए?
१०. परिचालक निकायले गरेको फैसला पालन गर्दा प्रथम शताब्दीका मण्डलीहरूमा परिणाम कस्तो भयो? (शीर्षकमाथिको चित्र हेर्नुहोस्)
१० प्रेषित १६:४, ५ पढ्‌नुहोस्। परिचालक निकायको प्रतिनिधिको रूपमा यात्रा गर्ने एल्डरहरूले आफू जुन-जुन सहर जान्थे, त्यहाँ-त्यहाँ “यरूशलेमका प्रेषित र एल्डरहरूले गरेको फैसला” सुनाउँथे। मण्डलीहरूले ती फैसला पालन गर्दा उनीहरूको “विश्वास बलियो हुँदै जानुका साथै उनीहरूको सङ्‌ख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्‌दै गयो।” यस विवरणबाट हामी कस्तो पाठ सिक्न सक्छौं? अहिले हामीले पनि आ-आफ्नो मण्डलीमा लागू गर्न सक्ने कुनै बुँदा छ कि?
के तपाईं निर्देशन पालन गर्नुहुन्छ?
११. परमेश्वरको सङ्‌गठनबाट निर्देशन आउँदा नियुक्त पुरुषहरूले के गर्नुपर्छ?
११ अहिले परमेश्वरको सङ्‌गठनबाट निर्देशन पाउँदा शाखा समिति वा उपशाखा समितिका सदस्यहरू, क्षेत्रीय निरीक्षक र मण्डलीका एल्डरहरूले के गर्नुपर्छ? यहोवाको वचनले हामी सबैलाई आज्ञाकारी हुन र अधीनमा बस्न निर्देशन दिन्छ। (व्यव. ३०:१६; हिब्रू १३:७, १७) यहोवाको सङ्‌गठनमा आलोचनात्मक वा विद्रोही मनोभावको लागि कुनै ठाउँ छैन। किनभने त्यस्तो मनोभावले हाम्रो मण्डलीका सदस्यहरूबीचको एकता, माया र शान्तिलाई खलबल्याउँछ। हुन त कोही पनि वफादार ख्रीष्टियनले डियोत्रिफसको जस्तो अनादरपूर्ण र अवफादार मनोभाव देखाउन चाहँदैन। (३ यूहन्ना ९, १० पढ्‌नुहोस्) प्रत्येकले आफूलाई यस्ता प्रश्नहरू सोध्नु राम्रो हो: ‘के म आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीको आध्यात्मिकतालाई अझ बलियो बनाउँछु? के म नेतृत्व लिइरहेका दाजुभाइले दिने निर्देशन तुरुन्तै स्वीकार्छु अनि त्यसलाई समर्थन गरिहाल्छु?’
१२. एल्डर र सहायक सेवकहरू नियुक्त गर्ने तरिकामा कस्तो छाँटकाँट भएको छ?
१२ परिचालक निकायले हालै गरेको एउटा निर्णयलाई विचार गर्नुहोस्। प्रहरीधरहरा नोभेम्बर १५, २०१४ को “पाठकहरूको प्रश्न”-मा एल्डर र सहायक सेवकहरू नियुक्त गर्ने तरिकामा गरिएको छाँटकाँटबारे बताइएको थियो। त्यस लेखमा बताइएअनुसार प्रथम शताब्दीको परिचालक निकायले त्यस्ता नियुक्तिहरू गर्ने अख्तियार परिभ्रमण निरीक्षकहरूलाई सुम्पेको थियो। त्यही नमुनाअनुसार सेप्टेम्बर १, २०१४ देखि क्षेत्रीय निरीक्षकहरूले एल्डर र सहायक सेवकहरू नियुक्त गर्न थालेका छन्‌। एल्डर वा सहायक सेवकको जिम्मेवारी सँभाल्न सिफारिस गरिएका पुरुषहरूलाई क्षेत्रीय निरीक्षकले राम्ररी चिन्ने अनि सम्भव भएमा तिनीहरूसित प्रचारकार्यमा समय बिताउने कोसिस गर्छन्‌। साथै, ती भाइको परिवारको पनि राम्ररी अवलोकन गर्छन्‌। (१ तिमो. ३:४, ५) त्यसपछि एल्डरहरूको निकाय र क्षेत्रीय निरीक्षकले सहायक सेवक र एल्डरहरूको लागि धर्मशास्त्रमा दिइएका योग्यताहरू राम्ररी केलाउँछन्‌। —१ तिमो. ३:१-१०, १२, १३; १ पत्रु. ५:१-३.
१३. एल्डरहरूले निर्देशन दिंदा हामी कसरी तिनीहरूलाई साथ दिएको देखाउन सक्छौं?
१३ एल्डरहरूले बाइबलबाट दिने निर्देशन हामीले पालन गर्नुपर्छ। परमेश्वरको सङ्‌गठनमा भएका यी वफादार गोठालाहरू उहाँको वचनमा पाइने “साँचो” अर्थात्‌ उपयोगी, हितकर शिक्षाअनुसार चल्छन्‌। (१ तिमो. ६:३) मण्डलीमा बेकाइदासित चल्ने मानिसहरूबारे पावलले दिएको सल्लाहलाई विचार गर्नुहोस्। केही व्यक्तिहरू ‘पटक्कै काम गर्न चाहँदैनथे तर आफूसित सरोकार नभएका कुराहरूमा भने हस्तक्षेप गर्दै हिंड्‌थे।’ तिनीहरूलाई एल्डरहरूले पक्कै पनि सल्लाह दिएको हुनुपर्छ तर तिनीहरूले सल्लाहको बेवास्ता गरिरहे। त्यस्ता व्यक्तिसित मण्डलीले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्थ्यो? पावलले यस्तो सल्लाह दिए: “त्यस्तालाई याद गरिराख र ऊसित सङ्‌गत गर्न छोड।” तर त्यस व्यक्तिलाई शत्रुजस्तो नठान्न पनि सजग गराइएको थियो। (२ थिस्स. ३:११-१५) उदाहरणको लागि, मण्डलीको कुनै सदस्यले गैर-साक्षीसित डेटिङ गरिरहेको छ। यस्तो कामले मण्डलीको बदनाम हुने कुरा थाह पाएपछि एल्डरहरूले सबैलाई होसियार गराउन त्यही विषयसित सम्बन्धित भाषण दिन सक्छन्‌। (१ कोरि. ७:३९) यस विषयमा भाषण दिन आवश्यक ठानेर एल्डरहरूले भाषण दिंदा तपाईं के गर्नुहुन्छ? भाषणमा बताइएको अवस्थाबारे तपाईंलाई थाह छ भने के तपाईं त्यस व्यक्तिसित सङ्‌गत गर्नदेखि सावधान हुनुहुनेछ? तपाईंको मायालु चासो र दृढ अडानले गर्दा तिनी आफ्नो गलत मार्ग त्याग्नसमेत अग्रसर हुन सक्छन्‌। 
स्वच्छता, शान्ति र एकता कायम गर्नुहोस्
१४. मण्डलीको स्वच्छता कायम गर्न हामी कसरी टेवा पुऱ्याउन सक्छौं?
१४ परमेश्वरको वचनमा पाइने निर्देशन पालन गरेर हामी मण्डलीको आध्यात्मिक स्वच्छता कायम गर्न टेवा पुऱ्याउन सक्छौं। प्रथम शताब्दीको कोरिन्थ मण्डलीमा भएको एउटा अवस्थालाई विचार गर्नुहोस्। पावलले कोरिन्थ सहरमा प्रचार गर्न आफ्नो जिउज्यान अर्पण गरेका थिए अनि तिनी आफ्ना सङ्‌गी “पवित्र जनहरू”-लाई माया गर्थे। (१ कोरि. १:१, २) तर त्यस मण्डलीमा कसैले अवैध यौनसम्बन्ध राखिरहेको थियो र त्यो समस्या सच्याइएको थिएन। यसबारे थाह पाउँदा पावललाई कस्तो लाग्यो होला, कल्पना गर्नुहोस् त! त्यस मानिसलाई सैतानलाई सुम्पिदेओ भनेर पावलले मण्डलीका एल्डरहरूलाई निर्देशन दिए। भनौं भने, त्यस मानिसलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने थियो। मण्डलीको शुद्धता बिटुलो हुन नदिन एल्डरहरूले त्यस “खमिरलाई” हटाउनुपर्ने थियो। (१ कोरि. ५:१, ५-७, १२) गलत काम गरेर पश्‍चात्ताप नगर्ने व्यक्तिलाई बहिष्कार गर्ने एल्डरहरूको निर्णयलाई समर्थन गर्दा हामीले मण्डलीको स्वच्छतालाई बिटुलो हुन दिंदैनौं। अनि त्यस व्यक्तिलाई पश्‍चात्ताप गरेर यहोवासित माफी माग्नसमेत झकझकाइरहेका हुन सक्छौं।
१५. हामी कसरी मण्डलीको शान्ति कायम गर्न सक्छौं?
१५ कोरिन्थ मण्डलीमा अर्को एउटा समस्या पनि थियो। केही सदस्यहरूले आफ्ना सङ्‌गी उपासकहरूविरुद्ध मुद्दा हालेर तिनीहरूलाई अदालतसम्म पुऱ्याइरहेका थिए। पावलले तिनीहरूलाई यस्तो गम्भीर प्रश्न सोधे: “बरु तिमीहरू किन अन्याय सहँदैनौ?” (१ कोरि. ६:१-८) अहिले हाम्रो समयमा पनि त्यस्तै अवस्थाहरू भएका छन्‌। कहिलेकाहीं मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनी मिलेर कुनै व्यापार गर्दा घाटा बेहोर्नुपरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा कोही-कोही भाइबहिनीहरू एकअर्कालाई जालसाजीको आरोप लगाउनसमेत पछि परेका छैनन्‌। यसले गर्दा भाइबहिनीबीचको एकता खलबलिएको छ। अनि कसै-कसैले आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीविरुद्ध मुद्दा हालेर अदालतसम्म पुऱ्याएका छन्‌। तर परमेश्वरको वचनले भने उहाँको नामको बदनाम गर्नु वा मण्डलीको शान्ति खलबल्याउनुभन्दा आफूले अन्याय सहनु बेस हो भनी बुझ्न मदत गर्छ।  भाइबहिनीबीच गम्भीर समस्या वा मतभेद सुल्झाउन हामीले येशूको सल्लाह पालन गर्नै पर्छ। (मत्ती ५:२३, २४; १८:१५-१७ पढ्‌नुहोस्) येशूको सल्लाह लागू गऱ्यौं भने यहोवाका उपासकहरूमाझ छाएको शान्तिलाई खलबलिन दिनेछैनौं।
१६. यहोवाका उपासकहरू एकताबद्ध भएको हामी किन आशा गर्छौं?
१६ यहोवा आफ्ना उपासकहरू किन एकताबद्ध भएको चाहनुहुन्छ भनेर उहाँको वचनमा बताइएको छ। भजनहारले यस्तो भजन गाए: “समाजका दाज्यू-भाइहरू आपसमा एकतामा भएर बस्नु। कत्ति असल र मनोहर कुरा हुन्छ!” (भज. १३३:१) इस्राएलीहरूले यहोवाको आज्ञा पालन गर्दा तिनीहरू व्यवस्थित अनि एकताबद्ध थिए। आफ्ना उपासकहरूको भावी अवस्थाबारे परमेश्वरले यस्तो घोषणा गर्नुभयो: “म तिनीहरूलाई एकै ठाउँमा राख्नेछु—गोठमा भेडा-बाख्राहरूझैं।” (मीका २:१२) यहोवाले भविष्यवक्ता सपन्याहमार्फत यस्तो भविष्यवाणी गर्नुभयो: “देश देशका मानिसहरूलाई [धर्मशास्त्रमा पाइने सत्यअनुसारको] एउटा शुद्ध भाषा बोल्न लाउनेछु, र तिनीहरू सबैले परमप्रभुको नाउँको पुकारा गरेर एकै हृदयको भएर उहाँको सेवा गर्नेछन्‌।” (सप. ३:९) सबै जना मिलेर यहोवाको सेवा गर्न अर्थात्‌ उहाँको उपासना गर्न पाएकोमा हामी कत्ति धन्यवादी छौं!
एल्डरहरूले गलत कदम चाल्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरको वचनबाट सल्लाह दिन प्रयास गर्छन्‌ (अनुच्छेद १७ हेर्नुहोस्)
१७. मण्डलीको एकता र स्वच्छता कायम राख्न एल्डरहरूले गलत कदम चाल्ने व्यक्तिलाई के गर्नुपर्छ?
१७ मण्डलीको एकता र स्वच्छता कायम राख्न एल्डरहरूले न्यायिक मामिलाहरू तुरुन्तै अनि मायालु ढङ्‌गमा सुल्झाइहाल्नुपर्छ। परमेश्वर केवल भावनामा बहेर कसैलाई माया गर्ने र कसैलाई घृणा गर्ने गर्नुहुन्न अनि उहाँले गलत कुरालाई नदेखेझैं गर्नुहुन्न भनेर पावललाई थाह थियो। (हितो. १५:३) त्यसैलेपावल कोरिन्थीहरूलाई पहिलो पत्र लेख्नदेखि पछि हटेनन्‌; तिनले त्यस पत्रमा कडा सल्लाह दिए, तर मायालु ढङ्‌गमा। पावलले कोरिन्थीहरूलाई पहिलो पत्र लेखेको केही महिनापछि दोस्रो पत्र पनि लेखे। त्यस पत्रमा बताइएझैं कोरिन्थ मण्डलीका एल्डरहरूले प्रेषित पावलको निर्देशन लागू गरेको हुँदा अवस्था केही सुध्रिएको थियो। यदि कोही ख्रीष्टियनले अनजानमा कुनै गलत कदम चालिहाल्यो भने पनि योग्य पुरुषहरूले नम्र मनोभाव देखाउँदै तिनलाई सच्याउने कोसिस गर्नुपर्छ।—गला. ६:१.
१८. (क) परमेश्वरको वचनमा दिइएको सल्लाहले प्रथम शताब्दीका मण्डलीहरूलाई कुन-कुन तरिकामा मदत गऱ्यो? (ख) यसपछिको लेखमा हामी के छलफल गर्नेछौं?
१८ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको वचनमा पाइने सल्लाहले प्रथम शताब्दीमा कोरिन्थ तथा अन्य ठाउँका ख्रीष्टियनहरूलाई मण्डलीको स्वच्छता, शान्ति र एकता कायम गर्न मदत गऱ्यो भन्ने कुरामा कुनै शङ्‌का छैन। (१ कोरि. १:१०; एफि. ४:११-१३; १ पत्रु. ३:८) परमेश्वरको वचनमा पाइने सल्लाह लागू गरेको हुँदा त्यतिबेलाका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीले व्यापक तवरमा प्रचार गर्न सके। भनौं भने, पावलले “सुसमाचार आकाशमुनि भएका सबै मानिसहरूमाझ प्रचार भयो” भन्न सके। (कल. १:२३) आज पनि यहोवाका उपासकहरू एकताबद्ध अनि व्यवस्थित भई प्रचारकार्यमा भाग लिइरहेका छन्‌। त्यसले गर्दा परमेश्वरको उद्देश्यबारे संसारभरि प्रचार हुँदै छ। उहाँका जनहरू बाइबललाई अत्यन्तै कदर गर्छन्‌ र सर्वोच्च परमेश्वर यहोवाको आदर गर्न कटिबद्ध छन्‌ भनेर यसपछिको लेखले थप प्रमाण दिनेछ।—भज. ७१:१५, १६.
^  (अनुच्छेद १३) यहोवाको इच्छाबमोजिम गर्न सङ्‌गठित, पृ. १३४-१३६ हेर्नुहोस्।
^  (अनुच्छेद १५) एक जना साक्षीले अर्को साक्षीविरूद्ध मुद्दा हाल्ने कि नहाल्ने भनी निर्णय गर्न सक्ने अवस्थाहरूबारे “आफूलाई परमेश्वरको प्रेम पाउन लायक बनाइराख” किताबको पृ. २५५ को फुटनोट हेर्नुहोस्।